HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Samy manana ny zavatra ampianariny momba ny maty ny fivavahana, ary mifanohitra izy ireny matetika. Mazava tsara anefa ny fanazavana omen’ny Baiboly.
Mankany ankoatra ve ny olona rehefa maty?
Betsaka no mino hoe mankany ankoatra ny olona rehefa maty. Ny olona sasany indray mino hoe mankany an-danitra ny tsara fanahy, ary mijalijaly any amin’ny afobe ny ratsy fanahy.
Tsy milaza ny Baiboly hoe mankany ankoatra isika rehefa maty. Tsy manana fanahy tsy mety maty isika, fa lasa vovoka fotsiny. Rehefa nanonona didim-pitsarana tamin’i Adama Andriamanitra, dia nilaza fa hiverina ho vovoka izy, ka tsy hisy aina hoatran’ilay vovoka nanamboarana azy.
“Fa vovoka ianao ary hiverina ho vovoka indray ianao.”—Genesisy 3:19.
“Tsy misy asa na eritreritra na fahalalana na fahendrena ao amin’ny Fasana.” (Mpitoriteny 9:10) Marina izany satria rehefa maty ny olona dia simba ny vatany, anisan’izany ny atidohany. “Miverina amin’ny tany nakana azy izy, ka androtr’iny ihany, dia foana ny eritreriny.” (Salamo 146:4) Tsy afaka manao na inona na inona ny maty. Izany no mahatonga ny Soratra Masina hampitovy azy ireny amin’ny olona “matory.”—Matio 9:24.
Rehefa misy havanao maty, dia lasa saina ianao hoe: Lasa aiza àry izy ireny? Manao ahoana izy ireny any? Mijaly ve? Rehefa fantatsika anefa izay lazain’ny Baiboly hoe tsy mahalala na inona na inona ny maty, dia lasa matanja-tsaina indray isika. Mahazo toky mantsy isika hoe tsy mijaly intsony ireny hava-malalantsika ireny.
‘Tsy mahalala na inona na inona ny maty.’—Mpitoriteny 9:5.
Mampanantena i Jehovah Andriamanitra fa hatsangany amin’ny maty ireo olona ao anatin’ny fitadidiany. Ho afaka hiaina ao amin’ilay tontolo vaovao hanjakan’ny fahamarinana izy ireo amin’izay. Mbola matory ao amin’ny fahafatesana anefa aloha izy ireo, mandra-pahatongan’ny fotoana hameloman’Andriamanitra azy indray. Tsy andrin’i Jehovah ny hampiasany ny heriny mba hamelomana indray an’ireny maty ireny. Mampahery antsika ny mahalala fa mbola hamoha an’ireo efa nodimandry i Jehovah, ka ho velona indray izy ireny amin’ny hoavy.—Asan’ny Apostoly 24:15.
“Manantena amin’Andriamanitra aho, araka izay antenain’izy ireo koa, fa hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina.”—Asan’ny Apostoly 24:15.
Maro no mino fa sazin’Andriamanitra mandrakizay ny mpanota. Ratsy fanahy toy izany ve izy? Inona no tena mitranga rehefa maty ny olona?
Hizara Hizara Ny Maty